Ma badan oo FLV videos soo bixi YouTube oo aad rabto inaad iyaga wareejiyo Adobe jilitaankii u tafatirka? Marka aad u samayn, waxaa laga yaabaa in aad soo gaarto dhibaato this: file oo ay leeyihiin nooca riixo aqlka. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in la badalo FLV in Adobe jilitaankii qaabab si buuxda u socon. Ka dib markii in, aad awoodaan in ay wax ka bedel FLV in jilitaankii si guul leh.
Taas aawadeed, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waxaa lagu soo bandhigay in aad. Waxa ay taageertaa wax ku dhowaad qaabab ouput audio iyo video oo caan ah, xataa qalabka iyo codsiyada ugu badan. Sidoo kale, waxay kuu ogolaanaysaa qaar ka mid ah koobin video muhiim ah sida video encoder, xallinta, heerka yara iyo heerka jir aad u dhigay. Sidaa daraadeed, waxaad si deg deg ah u bedeli karaan FLV in jilitaankii Adobe ah oo ay taageerayaan qaab sida wmv, si aad si guul leh ku soo dhoofsadaan karo files FLV si aad u Adobe jilitaankii in wax ka bedel. Just raacaan hage tallaabo-tallaabo hoos ku qoran.
By jidkii, FLV si Converter Ciyaar kale oo ay bixisaa dhammaan qalabka tafatirka video caadi ah oo anfacaya, waxaad tidhaahdaan, dalagga, cut, isku shaandheyn, ku dar watermark, files Cinwaan iyo saamaynta qabow kala duwan iwm Haddii u baahan, waxaad si toos ah edit karaa files FLV aad in this app.
1 Import FLV files si Converter video ah
Marka hore, ordo barnaamijkan. Markaas, aad u ogaato faylasha FLV deegaanka dooro kuwa aad rabto in aad wax ka bedel ku Adobe jilitaankii. Next, si toos ah jiidi kuwaas files kombiyuutar si ay leeg- tahay tan app ee. Alternatviely, riix badhanka in app si aad hanuunin si aad u ogaato faylasha FLV degaanka ee aad rabto in aad soo dhoofsadaan in app this.
Fiiro gaar ah: Haddii u baahan, waxaad riixi kartaa "..." badhanka hoose ee suuqa kala this in la beddelo jidka faylka. Haddii aad keligaa, files wax soo saarka lagu kaydin doonaa folder caadiga ah. Ka dib markii diinta, haddii aad ku dhacay fursad u Folder Open, aad awoodaan in ay si toos ah u heli files wax soo saarka.
2 Dooro qaab saaxiibtinimo Adobe jilitaankii
Dooro qaab socon u Adobe jilitaankii. Icon qaab image ku Murayaad Qaabka Output Hit, ka dibna tag "qaab"> "Video"> "Wmv". Dabcan, aad halkan dooran karaan oo ay taageerayaan qaab kale Adobe jilitaankii. Haddii u baahan tahay, waxaad riixi kartaa batoonka marsho qaabka ay u dhigay xalka video ah, heerka jir, heerka yara iwm
3 Beddelaan FLV in jilitaankii
Hit "Beddelaan" doorasho ee geeska midig hoose oo ka mid ah app this si loogu badalo FLV in Adobe jilitaankii qaabab taageeray. Daqiiqadii halka A ka dib, diinta kusoo dhamaan doono. Oo la joogo, waxaad ka heli kartaa faylasha la gediyay galka wax soo saarka ay. Markaas, dajiyaan files wax soo saarka si aad Adobe Ciyaar loogu video tafatirka.
Fiiro gaar ah: app waxa ku jira qalab badan oo video tafatirka anfacaya. Haddii aad rabto in aad ka gooyay, jar, darsamaan, dalagga, shaandheyn videos, ama qabsato saamaynta video, ku dar watermark iyo subtitles iwm, oo aad si toos ah u samayn karaa shaqooyin video tafatirka, kuwaas oo in app this.
> Resource > Video > Sida loo soo dejinta FLV in Adobe jilitaankii u Faalladaada